कृषि क्रान्तिको बाटो रोज्ने बेलकोटगढीको नगरसभापतिमा उम्मेदवारी दिने कृष्ण प्रसाद पाण्डेको उदेश्य के ? » RealPati.com
कृषि क्रान्तिको बाटो रोज्ने बेलकोटगढीको नगरसभापतिमा उम्मेदवारी दिने कृष्ण प्रसाद पाण्डेको उदेश्य के ?
नुवाकोट, सामाजिक कार्यमा क्रियाशिल भएर लागिरेहेका नुवाकोट, बेलकोटगढी–१३ का नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद पाण्डेले नगरसभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
कृषि क्रान्तिबाटै मात्रै नेपालको समग्र बिकास सम्भव रहेको बताउने पाण्डे विकास निर्माणको काममा निकै जोशिला र सक्रिय देखिन्छन् । उनले बेलकोटगढि नगरपालिकामा कृषि फर्म संचालन गरि कागती खेतीसमेत गर्दै आएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसबाट राजनीतिमा लागेका पाण्डे राजनीतिलाई पेशाको रुपमा नभई समाजसेवाको रुपमा काम गरि समाजमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । समाजमा केहि गर्न पर्छ भन्ने उदेश्यकासाथ आफुले उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताएका छन् ।
पछिल्लो समय नेतृत्व हस्तान्तरको आवाज उठिरहेका बेला नयाँ र पुरानो पुस्ताबीच समन्वयकारी भूमिका निभाउन सक्ने प्रतिबद्धता सहित आफूले उम्मेदवारीको घोषणा गरेको पाण्डेले बताएका छन् । कृष्ण प्रसाद पाण्डे नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद बहादुरसिंह लामा सँग नजिक मानिने क्षेत्र नं २ का क्षेत्रिय सदस्य पनि हुन् ।
पाण्डे आफै उद्यमी रहिसकेको हिसाबले पनि आत्मनिर्भर नेतृत्व बिकास गराउने धारणा राख्छन् । “कार्यकर्ताहरुलाई आफ्नो झोलै मात्र बोकाउने मेरो राजनीति हैन ।, उनि भन्छन् —राजनीतिमा कलंकको टिकाबाट बच्न, सफा राजनीति गर्न आर्थिक पाटोबाट सक्षम हुनै पर्दछ भन्ने मेरो अटुट बिश्वास रही आएको छ र त्यसका लागि म समस्त युवा साथीहरुसँग छु ।”
म बोलेर भन्दा गरेर देखाउने मान्छे हुँ । मेरो उचित मुल्यांकन गर्दै मलाई सभापतिमा निर्वाचित गराइदिनुहुन यहाँहरु समक्ष बिनम्र अनुरोध गर्दछु भनी प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
नगर सभापतिमा आफ्नो उमेद्द्वारीबारे नेता पाण्डे भन्छन् — “ म पछिल्लो तिस बर्षदेखि पार्टीको इमान्दार सिपाहीको रुपमा आवश्यक पर्दा अनवरत रुपले खट्दै आएको मान्छें हुँ । व्यवसाय र राजनीतिलाई हिजोको दिन सम्म संगसंगै अगाडि बढाईरहेको थिए भने आज म यो समाज रुपान्तरण मा केहि गर्ने पर्छ भनेर पूर्णकालीन राजनीतिमा छु । म आफै पनि पार्टिको कार्यकर्ता रहँदा माओवादी अपहरणमा परेको हुनाले गाउँमा बसेर राजनीति गर्नुभएका अग्रजको दुख पिढा म महसुस गर्न सक्दछु, उहाँहरुलाई सम्मान गर्दै युवा पुस्ताको उचित व्यवस्थापन गर्नेछु ।
उनि थप्छन् —“अहिले युवापुस्ताको निम्ति केहिने मेरो चाहाना पहिलेदेखि नै थियो र केहि गर्दै आएको अवस्थामा अब जनताको साथ र सहयोगबाट अझै युवापुस्ताको लागि स्वरोजगारदेखि उद्यमशिलताको अभियान संचालन गरि आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर बताउन लाग्नेछु । तसर्थ आफुलाई निर्वाचित गराई राजनितिक, आर्थिक र सामाजिकरुपमा समाजका लागि उपलब्धिमुलक काम गर्ने अवसर दिन उनले आग्रह गरेका छन् ।